Jose Mourinho ayaa diiday inuu ku eedeeyo ciyaartoydiisa Manchester United inay guul darro 1-0 ah kasoo gaartay Basel habeenkii arbacada. | Ciyaarside.com
Jose Mourinho ayaa diiday inuu ku eedeeyo ciyaartoydiisa Manchester United inay guul darro 1-0 ah kasoo gaartay Basel habeenkii arbacada.
Nov 23, 2017 - Aragtiyood
Michael Lang ayaa ku guuleystay in uu jabiyo 100% rikoorkii kooxda United ee heerarka group-ka, taas oo macnaheedu yahay in United ay weli u baahan tahay inay dhibic ka hesho kulankooda ugu dambeeya ee ay la ciyaarayaan CSKA Moscow.
Anthony Martial iyo Marcos Rojo ayaa ku soo wada bilowday United, laakiin weerarka Lang ayaa kooxda reer Swiss ku guuleystay in ay gool dhaliso taso oo sababtay in ay man utd ubaahato hal dhib ciyaarta soo socota.
Mourinho ayaa ka careysnaa kooxdiisii, laakiin waxay u baahan yihiin kaliya inay ka fogaadaan guuldarro ka soo gaarta kooxda Ruush ah ee ay ku marti qaadayaan Old Trafford si ay horumar ugu sameeyaan.
Isku aadka Basel ayaa xaqiijin laheyd booska ugu sareeya, laakiin United ayaa u muuqata inay ku xiran tahay labo maskaxeed oo ku saabsan inay iska dhigi karaan iyo inay xaqiijin karaan dhibco ama isku dayaan inay ku guuleystaan old trafford.
Nemanja Matic, Ander Herrera iyo Chris Smalling ayaa muujinaya niyadjabkooda ka dib goolkii Basel
Markii ay ka sii baxayeen garoonka ku waas oo dhamaanba maxada hoos u jeedshay indhahana siin waayey jamaahiirta man utd,
Waxaan la ciyaarnay koox ciyaareysay shan daafac, “ayuu yiri Mourinho
“Waxaan isku dayeynay inaan la ciyaarno seddex ciyaaryahan oo weerarka ka ciyaara, waana shaqadii qeybtii hore, sababtoo ah ma aysan qaban Karin wax weerar ah oo ay nagu soo qaadan.
” Ma aanan dhalinin wax gool ah qeybtii labaad, sababtoo ah xaqiiqda aan ognahay hal dhibic ayaa anagu filan.
Haatan marka aan tagno masarax riyada waxaan u baahan nahay in aan ka jawaabno waxaanu luminay oo ah in aan qaldanay waayo waa la saxaa khaladka laakiin waa in aan ku saxnaa jamaahiirta hortooda jose oo hadalka sii wata lana hadlayey sportmail ayaa sheegay in aysan jirin cabsi ah in ay ka haraan champions league.